၁၇၇ ရက် - ED & HOCD၊ ရည်းစား၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ Brain On Porn
ငါလက်တဆုပ်စာအချိန်ကိုရှေ့သို့အမြန်ဆုံးငါကောလိပ်ကျောင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့စိုက်ထူ၏အလုံအလောက်နီးကပ်ဘာမှအောင်မြင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်သင်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောသူတ ဦး တည်းငရဲရ။ ငါအတော်လေးကျန်းမာတယ်, အများကြီးထွက်အလုပ်လုပ်, ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးရှာဖွေနေကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ ရယ်မောခြင်းကကျွန်မရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီမအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုတွေကကျွန်မကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေခဲ့ပြီးခဏလောက်ကြိုးစားမှုကိုရှောင်ခဲ့ရသည်။ ငါနေဆဲအကြီးအအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထအပေါ်အခြားမည်သည့်အပြစ်ကိုမျှအပြစ်မတင်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်နေသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ခဏအကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်စာသားများအရခက်ခဲစွာမရရှိနိုင်ကြောင်းပြောစရာမလိုပါ။ ငါကဒီမှာနှင့်မုသာအနည်းငယ်မုသာစကားကိုသော်လည်း, ငါဘဝနေထိုင်ခဲ့, ငါမမျှော်လင့်ဘဲမိန်းကလေးများမြောင်းနှင့်အမှုအရာအပူများလွန်းပြီးနောက်ပြန်ဆွဲထုတ်ရှိရာပါတီများ။ တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ GF ကိုစိတ်ဝင်စားလာသောအခါကျွန်ုပ်၏ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သို့အမြန်သွားပါ။ အဲဒီမှာအလွန်အဆင်မပြေညတွေအများကြီး၊ စိတ်နာကျင်မှုတွေ၊ ငရဲလိုဝမ်းနည်းဖွယ်မှန်ထဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ညနေခင်းတွေတကယ်စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေဖြစ်ပေမယ့်ငါကစာသားကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ ED သွေးဆောင်မှုအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုထိမိခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ကစပြီးငါမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ ငါဘောလုံးတွေကြီးထွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘ ၀ မှာအခက်ခဲဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ခက်ပါတယ်ဟားဟား၊ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့သူမနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာသင်မဟုတ်ဘဲသူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိအောင်လုပ်ပါ။ ဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲ, ထိုသို့ဆိုလို။
သူမကငါ့ကိုစကတ်နဲ့ဘာမှမကျွမ်းကျင်နိုင်တာကိုမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြားရှုထောင့်တွေအတွက်လူတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းတွင်အောင်မြင်သောလူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုယခုတွင်ကျွမ်းကျင်သည်။ သူမကကျွန်မရဲ့ပြissueနာကိုစာနာပြီးကျွန်မတို့အဲဒီကတည်းကစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်ကြီးထွားဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ ၎င်းသည်သူမအားသူမအတွက်မည်သည့်အခါကမျှကျေးဇူးတင်စကားမပြောနိုင်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်များစွာပေးဆပ်ရသည်။ ဒါတွေအားလုံးကဖြစ်ပျက်နေချိန်မှာငါတို့ပျော်စရာမကောင်းဘူးလို့မပြောသင့်ဘူး။ ငါရက်ပေါင်း 90 အကြာတွင်ငါပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုတွေ့မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့သည့်အခါငါတို့နှုတ်ကိုများစွာသောအလုပ်များခဲ့ကြသည်ဆိုပါစို့။
ငါ rebooting နှင့်အတူမည်သည့်ပြissueနာကိုရှာမတွေ့ပါ။ ငါချက်ချင်းအအေးကြက်ဆင်တော့ဘူး။ ငါတကယ်ပြtheနာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်အခါငါအစွန်းရောက်လှုံ့ဆျောမှုရှိသည်။ သင်ချစ်သောမိန်းမနှင့်အိပ်ခြင်းကဲ့သို့ပန်းတိုင်ထားခြင်းသည်မထိခိုက်ပါ။ ပြောဖို့မေ့သွားတယ်၊ ကျွန်တော်အလုပ်အတွက်ဝေးလံခေါင်သီမသွားမီတစ်လနီးပါးကြာအောင်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ရှည်လျားသောအကွာအဝေးမင်းသမီးနှင့်တကွသင်၏သူတို့အားဒီတော့သင် skype, အရံဖန်ရံခါညစ်ပတ်စာသား, နှင့်သူမ၏ထံမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်၏အထွေထွေမရှိခြင်းနှင့်အတူရှိချင်ဘယ်မှာမှရနိုင်, မဖဲ့ခြွေ။ ငါပြောဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ် ငါကမပြည့်စုံဘူး၊ ငါတို့ကထပ်ခါတလဲလဲ sext လုပ်မယ်၊ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးနဲ့ဝေမျှမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအဆင်သင့်ပဲ၊ ကန်တယ်
ငါနိဂုံးချုပ်သောအရာ, လူများသည်စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနည်းခြင်းနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောယေဘုယျပြproblemsနာများကိုအတူတကွစုစည်းလေ့ရှိသည်။ ငါကတစ်ရဲနည်းနည်းထွက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာတစ် ဦး ချင်းစီမှပိုင်ဆိုင်။ ငါအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့်ဂုဏ်ထူးဖြင့်ဘွဲ့ရရှိပြီးဒီအလုပ်များနေစဉ်အလုပ်တစ်ခုရခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ကိုလည်းငါဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်တာအများစုဟာငါတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုကအားကြီးတယ်၊ မင်းကဒါကိုအလုံအလောက်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာပျင်းရိမှုနည်းတယ်လို့ထင်ရလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးကို ပို၍ ပင်အာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။ ကြွက်သားတွေ ၀ တ်ဆင်ထားတယ်၊ ကျုပ်ရဲ့အစားအစာကိုလဲလိုက်တယ်။ ဒီဟာကငါနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်နိုင်သမျှတိုင်းတာတယ်။
အဆိုပါ reboot နောက်မှငါအမှန်တကယ်မကျေနပ်မှုတစ်ဦးမဖြစ်မနေကြောင်းယုံကြည် စာသားအလင်းနှင့်မဟုတ်သောရည်မှန်းချက် oriented မိမိကိုယ်ကိုထိတွေ့အပေါ်ခံစားချက်ပေမယ့်ဘာမျှကိုအာရုံစိုက်ဖို့နေ့တိုင်းအနည်းငယ်မိယူပြီးပြန်လည်နာလန်ထူ၏နောက်ဆုံးခြေထောက်မှအရေးပါသည်။ အဲဒီမှာခဏကျွန်မဘယ်နေရာမှာသွားခဲ့ပါသည်, ငါသည် 150 နေ့ကအမှတ်အသားအတိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလူတွေတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလက်ျာဘက်အရာအားလုံးကိုလုပ်နေခဲ့သည်ထင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအကြွင်းမဲ့အာဏာငရဲနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ သူတို့အားဆက်သွယ်မှုပြန်လည်တည်ထောင်အရေးကြီးပါသည်။ porn ကနေဝေးနေပါကလူအပေါင်းတို့၏အာရုံခံစားမှုအာရုံစိုက်ပါ။
ရှေ့ဆက်အချို့တကယ် shitty ကြိမ်ရှိပါတယ်။ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအကြိမ်အနည်းငယ်ငိုကြွေးခြင်းပါပြီ။ ငါက get freaking, ငါ့ကိုခိုလှုံပါ၏။ အဲဒီမှာဤကဲ့သို့သောယောကျ်ားဘဝသတ်မှတ်ပေးရန်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမြင်တတ်ဖို့အရမ်းဖိအားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်သည်အဘယ်အရာကိုသိသလော တစ်ဦးအချည်းနှီးသောစိတ်တိရိစ္ဆာန်ငါ့ကိုအချို့ဆုလာဘ်ပေးတော်မူပြီနဲ့တူဈ fruitlessly လိင် perused ကြလိမ့်မယ်လို့သမျှသောအချိန်ယူပြီး။ ငါကျနော်တို့မှာအများကြီးအလြောကျထားပါတယ်သောငါ၏ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေး, လေ့လာဖို့သောအခြိနျကာလကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါအံ့မခန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူမေတ္တာနှင့်ပွင့်လင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ယခုဖြစ်၏။ ကျနော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Compatibility ကို, ချစ်ခြင်း, ကျနော်တို့လိင်အဘို့အလိုခငျြသောအရာကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ လိင်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မှောငါ့ကိုသူမ၏ငါ့ကိစ္စကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အရာအားလုံးသောနောက်ဒါပွင့်လင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုအရင်ဆိုင်ဖို့အဘို့အထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူထွက်လာခဲ့ကြသကဲ့သို့ငါတို့မဟုတ်သောတရားသဖြင့်စီရင်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
သူမခံစားချက်၊ သူမကြိုက်တာတွေအကြောင်းကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးလျှာနှင့်လက်ချောင်းများနှင့်ပါရမီရှင်အတော်များများဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းဝက်အူ, ငါဒီငါ့ကိုဆက်သွယ်မှုချဉ်းကပ်ရန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းပေးပြီထင် ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွေးဆောင် chastity ခါးပတ်ကဲ့သို့။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်မှန်ကန်သောအမျိုးသမီးနှင့်သင်ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်သည်။ ယောက်ျားတွေကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်လိုမျိုးစွန့်ခွာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ကိုသွားရှာနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးရဲ့တစ်ခုတည်းသောအာရုံမဖြစ်သင့်ဘူး။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပါကသူတို့သည်နားလည်ပြီးကူညီလိုစိတ်ရှိလိမ့်မည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အကူအညီသည်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Fellas, မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဝေးဝေးနေပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုနေရာတွင်အင်တာနက်ပေါ်မှဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအတုအယောင် Viagra များကိုကြည့်နေသောမျက်နှာပြင်တွင်သရုပ်ဆောင်နေသည်။ အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွားနဲ့ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူး, သင်ပြုလျှင်သင်၏လန်းအမ်းစထရောင်းကဲ့သို့ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒီအောင်ပွဲကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေလိုပဲမင်းတို့လိုချင်တာ။ သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်အားမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုကိုရရှိနိုင်မည့်တစ်နေ့တာကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ရန်သင်အားကောင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဤမျှကာလပတ်လုံး, 177 ရက်ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်အထူးသဖြင့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ငါမထိုညဉ့်ကိုဖန်ဆင်းသောအချက်သို့တယ်။ ဒါကအံ့မခန်းစရာမဟုတ်၊ သက်တမ်းလည်းမရှည်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါဒီကိစ္စကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နံနက်ခင်းနဲ့သင်္ဂြိုဟ်လိုက်တယ်။ yeah Shit! လူတိုင်း၏နေ့ရက်သည်သူတို့အတွက်အချိန်မီရောက်လိမ့်မည်။ ထိုနေ့မတိုင်မီအထိကောင်းသောအရာများကိုအာရုံစိုက်ပြီးသင့်ကိုတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်ပါ၊ ဤပြissueနာအားသင်မသတ်မှတ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ ၉၉% နှင့်သင့်ဘဝ၏ ၁၀၀% ကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဟာကမင်းကိုမနှောက်ယှက်စေနဲ့၊ တကယ်လူတစ်ယောက်လုပ်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့ ဘဝ၏စိန်ခေါ်မှုများကို ဦး စားပေးပါ။ ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်ပါနှင့်။ ငါဒီမှာထိုင်ခြင်းနှင့်ငါလွဲချော်သောအချိန်နောင်တရ, ဒါမှမဟုတ်နက်ဖြန်နေ့၌ငါ့မျက်စိစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး။
ဤတွင်ယောက်ျားအပေါ် bashing ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ranting ငါ့ထံသို့ link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ anyman ဖြစ်၏။ တစ်ဖတ်ရကျိုးနပ်။ ဒီကောင်လေးရေးသားခဲ့သည်ဆောင်းပါးငါ့ကိုပယ် pissed ။
လူတိုင်းဤသို့ပြုနိုင်သည်! ဆုတ်ယုတ်မှုတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျပါစေနဲ့။ ဘဝကိုပျော်မွေ့ရန်အချိန်ယူပါ။
သူ့ရဲ့ POST လင့်ထားသည် YourBrainRebalanced အပေါ်